VONO OLONA : Lehilahy voalaza fa misy tromba nanindrona antsy mpampianatra
Nosamborina ary naiditra am-ponja ny lehilahy iray voalaza fa jirika. Naiditra am-ponja vonjimaika izy rehefa nosamborin’ny fokonolona. 14 juillet 2017
Ny 25 jona teo no namono tovolahy iray mpampianatra any amin’ny Kaominina Ankoby ity lehilahy jirika ity.
Avy nampanao fanadinana CEPE ilay mpampianatra, ka nikasa ny handeha aty Mahajanga hamonjy ny fetin’ny 26 jona izy mivady. Nandeha niantsena izy ireo ary efa harivariva vao tafody. Teny an-dalana hody, efa hiakatra ny tanàna dia nifanehatra tamin’ny olona iray manao fitafy jirika izy. Sady mitondra saboha na lefona no misy antsy roa eo amin’ny sofiny. Nanontany ilay voalaza fa jirika hoe ‘longo sa tsy longo’ tamin’ireo mpivady avy niantsena. Mpivavaka ilay tovolahy ka namaly hoe ‘tsy misy androny mahalongonao zaho’.
Avy hatrany dia notorahany lefona ilay tovolahy saingy tafala ka tsy voa. Somary avoavo ny toerana nisy ilay jirika noho ilay tovolahy, ka nidinany ilay tovolahy no sady notsindrominy tamin’ny antsy teo amin’ny fony. Nijininika ny rà ary tsy ela dia maty ilay tovolahy. Niantso vonjy ilay vadiny ary nifanenjehana ilay jirika. Tany amin’ny tranon’ny reniny no nahatrarana azy ary araka ny vaovao azo dia tsy olona hafa fa olona mpandeha ao amin’izy ireo ihany.
Olona itoeran’ny tromban’ny dahalo
Ny atao hoe jirika dia saha na olona misy tromban’ny miaramilan’ny ampanjaka taloha, misy milaza hoe tromban’ny dahalo, ary mbola misy koa miteny fa fanahin’ny biby amin’ny natiora. Mampiavaka azy ireo ny manao lamba sy fehiloha mena.
Mihosotra tany fotsy ka araka ny fanazavana hatrany dia ny antsany, na ny fery nahazo azy tany aloha no ambara amin’io tany fotsy io. Mitondra saboha na lefona izy ireo ary ‘johary’ no fiantsoany ny olona. Tato anatin’ny dimy taona no tena nampahazo vahana ny jirika teto Mahajanga ary amin’ny fotoanan’ny Fanompoabe no tena ahitana azy. Any ambanivohitra any anefa dia tsy miandry Fanompoabe intsony ireo jirika no miseho masoandro fa rehefa mihetsika ny trombany dia manao fiakanjo jirika izy ireo.
Mety misy tokoa olona tena misy tromban’ny jirika, nefa misy ihany koa mody manao jirika entina hangatahana na hanerena ireo sendra azy ireo hanome vola azy. Mitondra lefona sy meso ary zava-maranitra izy ireo, nefa tsy tompon’ny tenany, ka izao mahavanon-doza izao.